Amawele edijithali angena kwindawo ephambili: iinkampani zobunjineli kunye nabanini bomnini. Ukubeka emisebenzini iminqweno yamawele e-SINGAPORE yedijithali- Unyaka kulwakhiwo lwe-2019- 24 ngo-Okthobha we-2019 -e-Systems, Incorporate, umboneleli wehlabathi wesoftware kunye neenkonzo zamawele zedijithali, wazisa iinkonzo ezintsha zelifu ...
Yonke into ejikeleze ngathi iya kuba yedijithali. Ubuchwepheshe obuphambili njengengqiqo yobuchule kunye ne-intanethi yezinto (IoT) ziba ziindawo ezibalulekileyo zoshishino ngalunye, ukwenza iinkqubo ngokukhawuleza nangempumelelo ngokubhekiselele kwiindleko, ixesha kunye nokulandelelana. Hambisa kwidijithali ...
Indawo edibeneyo - Isisombululo esifuna iGo-Engineering
Sifanele siphile umzuzu ozukileyo kwindawo apho iinqununu ezahlukeneyo, iinkqubo, abadlali, iimpawu kunye nezixhobo ziguqukela kumsebenzisi wokugqibela. Imfuno kwintsimi ye-Geo-yobunjineli namhlanje kukuba inezisombululo apho into yokugqibela ingenziwa kwaye kungekhona nje iindawo; nje ngo ...
Asiyithengisi i-software ngokuthe ngqo, sithengisa isiqhelo sesofthiwe. Abantu abasihlawulanga kwisofthiwe, bayasihlawula oko bakwenzayo. Ukukhula kukaBentley kuye kwavela kwinxalenye enkulu ngokufumana izinto. Amabini kulo nyaka babeBritani. Synchro; isofthiwe yokucwangcisa, kunye neLegion; Uhlelo lwemibala yesinzi ...
Ndandinethuba lokusebenzisana noGabriela okungenani ezintathu izihlandlo. Eyokuqala, kulezo zifundo zaseyunivesiti apho sasiyifumene ngokubanzi kwi-Faculty yobunjineli boLuntu; ngoko kwiCandelo loCwangciso loKwakha eklasini yokwakha kwaye kamva kwiprojekthi yedama leFrío River endaweni yeCuyamel, e ...
I-Bentley Systems ibhengeze iiprojekthi zokugqibela zokunikezelwa kwezinto ezintle ekusebenziseni izisombululo zesofthiwe kwi-infrastructure management. Ziyi-57 zokugqibela, ukusuka kwi-420 ukutyunjwa emhlabeni wonke kulo mcimbi we-2018. Amanani abandayo kodwa kubonisa ukuba kutheni unyaka odlulileyo wawuseSingapore, kwikomkhulu ...
I-Microstation kwincwadi yayo yoQhagamshelwano lwe-CONNECT Edition, ekuhlaziyweni kwayo i-7 isebenze ithuba lokusebenzisa iMephu ye-Bing njengomgca wesevisi yomfanekiso. Nangona kwakunokwenzeka ngaphambili, ibambe iqhosha lokuhlaziya i-Microsoft Bing; kodwa njengokuba ukhumbule, iMicrosoft ngoku iqabane eliphambili leBentley kwi-Pavilion Alliance, ...
Inkqubela ye-BIM - Inkcazo yeNkcazo yonyaka
Inkqubela yokumgangatho weZakhiwo zoLwazi lweZakhiwo (BIM) yimixholo yokunqamla umnqophiso weNkcazo yeNgxelo yeNgxelo, yenziwa ngo-Oktobha eSingapore. Nangona i-akhawunti yami ye-Twitter yayisetyenziswe ngo-hashtag #YII2017 ngaloo mihla, nantsi isishwankathelo. Uhambo Olu xesha ndi ...
BIM - mkhuba lakho CAD
Kwimeko yethu ye-Geo-Engineering, i-BIM (Ukwakha I-Information Modeling) ayisonaveli, evumela izinto ezahlukeneyo zobomi ukuba zihlanjululwe, kungekhona kuphela ekubonakalweni kwazo kwimizobo kodwa kwizigaba zazo ezahlukeneyo zobomi . Kuthetha ukuba, indlela, ibhuloho, i-valve, ishaneli, isakhiwo, ...
amazwe imini yonke ingqalelo e-government iintsingiselo apho iinkqubo lula xa bekhangela ekunikeni inkonzo engcono kubemi, kwakunye elinephepha lancipha ukuba urhwaphilizo kunye sama olungeyomfuneko. Siyazi ukuba umthetho, iziko kunye neenkqubo eziphathelele impahla kwilizwe ngalinye ...
cadastre, Okufumaneka, Geospatial - GIS, egeomates My
Akhuphe isatifiketi iirhafu zepropati ngexesha elilelona kubalulekile ukuba ubonelelo ngeenkonzo kwiinkalo Cadastre, oko ngomshini ngaphandle umgudu, ukuqinisekisa ukusebenza wayicola kobuntu. Kwindlela endala, xa sisebenza kunye noomasipala, xa umsebenzisi eceliwe isitifiketi nesitifiketi se-cadastral, isiqingatha somsebenzi si ...
Kwiveki eledlule INgqungquthela Yengqalasizinda yabanjelwa kunyaka we-2014, kwakhona eLondon, apho ibhaso elibizwa ngokuba yi-Inspired ibanjwe. Esi siganeko sasilungelelaniswe ngaphezu kwezinye izihlandlo, isicelo esiphezulu esilungiselelwe iOS ne-Android sasizilungele; kunye nokuhlaziywa, ...
Ukuzinza kweendawo ezibekwa ngababoneleli bezixhobo ze-Geo-yobunjineli kwizinto ezintsha kunye nokuzivumelanisa nokuveliswa kwezobuchwepheshe. Ukumiswa kuphawulwe kakhulu, kwindlela apho unxibelelwano lwentsebenziswano luthengisa ngayo okhethekileyo, nangona ukuba yonke imihla imingcingo phakathi koqeqesho iba nzima nakakhulu ...
Apple - Mac, AutoCAD-AutoDesk, ezintsha, Microstation-Bentley
Imveliso eyaziwa kakhulu yeBentley yi-Microstation, kunye neenguqu zayo ezicacileyo zamasebe ahlukeneyo we-geo-ingqineli ngokugxininiswa kwindlela yokuqulunqwa kwezinto zobunjineli, zoshishino, zobunjineli nezothutho. ProjectWise ngumveliso wesibini weBentley odibanisa ulawulo lolwazi kunye nokuhlanganiswa kweqela lomsebenzi; kwaye kutshanje ikhishwe ...
Xa amazwi lula, BIM (Building Information nokumodela) yeyona ngendaleko ngayo imfundiso endala ekuthiwa CAD (Computer Inkxaso Design) kwaye xa kukho iincwadi yonke ebhalwe ngawo emva Jerry Laiserin yathandwa kwekota, ukulungiselela iinjongo zemfundo kufuna ukuba sibe ngokulula kunokwenzeka: Ngaphambi, xa uklanywa isakhiwo, umakhi wezakhiwo emva kokudibana okulungileyo ...
I-Blogsy iyithuluzi elimangalisayo, ukuza kukubona okulungileyo kukubhala kwi-iPad. Njengomboniso, ndizimisele ukuhlaziya eli nqaku njengoko iibhaso zithunyelwa. Ndingathanda ukulandela iindwendwe zihlala kunye neWoopra, kodwa isicatshulwa sakhe sinzima kangangokuthi siye salahla isayithi amaxesha ambalwa, yintoni ...
I-model Bentley na isindululo ithandwe uboniso lwefayile DGN, kunye kungenzeka ngohlahlelo, uthethwano kwaqaqambisa XML olungisiweyo. Nangona kukho iiplagi zokusebenzisana ne-AutoDesk Revit kunye ne-iPad, mhlawumbi iimpawu ezidalwe kwi-Windows XP kunye ne-7 scanners zibonakala kakhulu kule ...